Qarax Archives - BaravaNewsBaravaNews
You are here: Home / Tag Archives: Qarax
Tag Archives: Qarax
Wararka nagasoo gaaraya EX koontorool Balcad ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi qarax xxogan jugtiisa laga maqlay qeybo badan oo ka mid ah degmooyinka gobalka Banaarir waxaana dadka deegaanku ay u sheegeen dalsan in ay maqlayaan dhawaqa saraas culus.
Dadka ka ag dhow aaga qaraxu uu ka dhacay ayaa dalsan waxa ay u sheegeen sheegeen in mar qura ay maqleen jug xooggan oo argagax gelisay,waxaana xigtay rasaas aan la ogeyn cidda ridaysa.
Dhowrkii Maalmood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacaayay qaraxyo joog ah kuwaasi oo aysan dowladu xitaa ka hadlin
Caalamka oo cambaareeyay Qaraxyadii shalay lagu weeraray qeybo ka mid ah Muqdisho ee somaaliya
Dowladdaha Caalamka iyo Ururro Caalami ah ayaa si kulul u cambaareeyay Qarax-yadii shalay lagu weeraray Kontoroolka laga galo Madaxtooyadda Soomaaliya.
Dowladdaha Carabta, kuwa Yurub, iyo dalka Mareykanka ayaa sheegay in Qaraxaasi ay aad uga naxeen,islamarkaana uu ku soo aaday xilli Amniga caasimadda uu soo hagaagaayay.
Waxaa ay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay ka caawin doonto sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadkii ay wax-yeelado kasoo gaartay Qaraxyadii shalay ka dhacay Muqdisho.
Al-Shabaab ayaa Laba Qarax iyo weerar toos ah shalay ku qaaday Barkontorool oo ay ku sugnaayeen ciidamada Ilaaladda Madaxtooyadda oo ku taalla Waddada gasha madaxtooyada ee ka timaada Isgoyska Ceel Gaabta.
Ku dhawaad Lix qof oo Isugu jira Askar , Kooxdii Weerarka soo qaaday iyo dad Shacab ah ayaa ku dhintay Qaraxyadii shalay ka dhacay Muqdisho.
Qaraxyadii iyo weeraraddii Shalay ayaa ku soo beegmay xilli inta badan ay xirnaayeen Wadooyinka Muqdisho maalmihii lasoo dhaafay.
Faah faahin oo ku saabsan Labada Qarax oo ka dhacay Caasimadda Somaaliya Muqdisho Maanta
Qaraxa hore ayaa ka dhacay maanta xiligii Salaada duhurkii ee Muqdisho meel gaadiidka lagu baaro oo ah waddo gasha garroonka dayuuradaha ee Aaden Cadde.
Wax yar uu kaddib markii uu qaraxaasi dhacay ayaa la maqlay jugta qarax labaad oo ka dhacay bar kontorool oo ku taalla agagaarka isgooyska Banaadir.
Qaraxan danbe ayeey wararku sheegayaan in uu dhacay kadib markii ciidanku ay rasaaseeyeen baabuur ay ka shakiyeen.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in gaariga ay saarnaayeena ugu yaraan saddex qof kuwaa oo isku dayey in ay xoog ku maraan kontoroolka.
Ciidamada ayaa toogtay raggii saarnaa gaariga, kadibna waxaa qarxay baabuurka. Goobta waxaa sidoo kale ku dhintay laba askari oo ka mid ahaa ciidamadii halkaa ku sugnaa.
Qaraxa ka dhaca waddada gasha garoonka diyaarada magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku dhintay qofkii ismiidaamiyaha ahaa halka labo Askarina ay ku dhaawacmeen.
Qaraxyadan oo dhan ayaa imanaya xili amaanka magaalada Muqdisho sare loo qaaday saddexdii cisho ee la dhaafnayna inta badan magaalada uu aad u yaraa dhaqdhaqaaqa dadka iyo gadiidka.
Qaraxu waxuu ka dhacay isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho gaar ahaan Barkontorool oo aan sidaas uga fogeyn Isgoyskaasi.
Ciidamada ayaa marka hore gaariga is qarxay ka shakiyay waxaana ay uga digeenn shacabka in ay u dhawaadaan sidaa daraadeed ciidamada oo ku howlan in ay xiraan waddada ayaa la sheegay in mar kaliya uu qaraxu dhacay.
Gaadiidka gargaarka deg dega ah ee Ambalaasta ayaa gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay, Ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale tagay goobta.
Duhurnimadan ayay aheyd markii qarax gaari uu ka dhacay wadada aada Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kaasi oo lala beegsaday Barkontorool oo ay ku sugnaayeen Ciidamada.
Lama soo sheegin wali khasaaraha ka dhashay Qaraxan danbe.
Maamulka gobolka Banaadir oo faah faahin ka bixiyay Qaraxyo ka dhacay Muqdisho
Maamulka gobolka Banaadir ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay labo Qarax oo goor dhaw ka dhacay magaalada Muqdisho.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane ayaa sheegay in ugu yaraan Labo ruux ay ku dhinteen qaar kalana ku dhaawacmeen Qarax ka dhacay Xaafadda Oodweyne ee gobolka Banaadir.
Qaraxa ayuu sheegay in uu miino dhulka loog aasay gaari uu la socday guddoomiye Laameed ka tirsan degmada Deyniile.
Sidoo kale Qarax labaad ayaa ka dhacay waddada Warshadaha ee magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka warshadda Biyaha Caafi, Lama soo sheegin Khasaare ka dhashay Qaraxa ka dhacay Warshadda Biyaha Caafi.
Dadka reer Muqdisho ayaa u muuqda kuwo foojignaan dheeraad ah ka qaba Qaraxyada loo adeegsado gadiidka iyo miinada dhul la galiyo oo waayadii ugu danbeeyay siweyn u soo kordhayay.
Qarax oo Maanta Khamis ka dhacay Muqdisho (Hotel Weheliye)
Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya khasaaraha Qaraxii cuslaa ee maanta ka dhacay hotelka Weheliye e magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in tirada dhimashadu gaartay 17 ruux.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdicasiis Xildhibaan ayaa sheegay in dadka dhintay u badan yihiin dad shacab ah oo fadhiyay ilinka hore ee Hotelka.
Dadka waxyeelladu ka soo gaartay weerarka ayaa waxaa ku jiray dad la socday gadiid goobta marayay oo u badna kuwa Mooto Bajaajka, sidoo kalana waxaa uu sababay bur bur xoogan oo soo gaaray dhimayaashii goobta ka agdhawaa iyo gadiid dadweyne.
Qaraxan ayaa noqonaya kii ugu cuslaa ee maalmihii ugu danbeeyay ka dhaca caasimada Muqdisho, lamana oga in qofka qaraxan geystay uu saarnaa gaariga iyo in goobta la soo dhigay meel ka fogna laga qarxiyay.
Total Hits : 98555